Indostrian'ny indostria | Tantsaha anaty aterneto | December 2019
Sokajy Indostrian'ny indostria
Torohevitra momba ny fikarakarana vyôlôfo any an-trano
Saintpaulia dia toeram-pambolena indostrialy mahazatra ary fantatra amin'ny anarana hoe violet Saint-Barok. Maherin'ny 32.000 ny karazana zavamaniry misy ankehitriny. Saingy raha vantany vao mividy volokano ianao dia manontany avy hatrany ny fanontaniana hoe: "Ahoana no hikarakarana tsara azy io?". Ny fifidianana ny toerana tsara indrindra ho an'i Saintpaulia Ny olana voalohany nipoitra avy hatrany taorian'ny fisehoan-jiro tao an-trano dia ny safidin'ny toeram-ponenany.
Fomba fikarakarana ny geraniums, fomba fananganana trano trano
Amin'ity lahatsoratra ity dia holazainay aminareo ny momba ny efitrano geraniums (antsoina hoe "kalachik"), hoe: ahoana ny fomba hikarakarana an'io zavamaniry io, inona ny tany hambolena sy ny fomba hisafidianana ny vilany tsara. Aza adino ny miresaka momba ny fomba fanoratana ny pelargonium. Fantatrao ve? Ny fianakaviana Geranium dia manana karazana 800 ary miely any amin'ny faritra atsimon'i Afrika sy Aostralia.
Balsam (Impatiens) dia trano famandrihana mahazatra antsika hatramin'ny fahazazany. Ilay anarana latinina Impatiens dia adika hoe "manohina", satria miparitaka amin'ny tsipika samihafa ny voam-balsama raha toa ka mikitika azy ireo ianao. Amin'ny ankapobeny dia mifandray amin'ny fahazazana ity voninkazo ity, satria saika ny renibeny rehetra ao an-trano dia manana "Spark", araka izay nantsoina.
Azo atao ve ny mamboly lisy any an-trano?
Noho ny endrika tsy mahazatra, ny hatsaran-tarehy manify, ny lisy dia heverina ho mariky ny fahadiovana sy ny tsy fananan-tsiny. Hatreto, ireo voninkazo ireo dia manala ireo fombam-pivavahana sy fotoam-pivavahana manerantany. Azo atao ve ny mamboly lisy any an-trano? Misy lily maniry mamelon-trano tsy vitan'ny hoe voninkazo sy voninkazo tsara tarehy, fa amin'ny fanandramana mahafinaritra ihany koa.
Ny tanindrazan'ny pelargonium dia India sy Afrika Atsimo. Io zavamaniry marevaka marevaka misy ravina maitso io dia fantatra fa tsy ny hatsaran-tarehiny sy ny fofony fotsiny, fa ny fananany medikaly, ary ny esotericists dia mino fa ny pelargonium ao an-trano dia mametraka ny toetrandro ara-tsaina ao amin'ny fianakaviana. Ny karazana Pelargonium Pelargonium dia sampan'ny fianakaviana Geranium.
Ahoana ny fomba ahafahana voninkazo tsara tarehy ao an-trano
Angamba, sarotra ny mahita voninkazo eo amin'ireo karazam-bozaka indostrialy izay mihoatra ny orkide iray ao aminy. Ny loko orkide dia misy tsilo lava sy malefaka, ary misy ambony ny voninkazo. Ny volombava orkide ary mahavariana amin'ny endrika sy loko samihafa. Na izany aza, ny orkide dia tena laingany ary misy fahasarotana marobe amin'ny fikarakarana.
Tsiambaratelon'ny fambolena sy fikarakarana alikaola
Raha mitady zavamaniry maitso sy manganohano ianao, dia tsy mety ny "manopy ny masonao" ny euonymus, fa ho an'ny mpankafy any amin'ny mandrakizay, dia tena ilainao tokoa izany. Ny voninkazo dia kely sy tsy dia mazava loatra, fa mbola mety ho fanampiny fanampiny ny zaridaina na trano "trano fonenana". Te-hiresaka momba ny safidy farany amin'ny antsipiriany bebe kokoa aho.
Inona no tokony ho fantatrao rehefa mamboly sy mitombo ny hazo dolara, torohevitra momba ny voninkazo voninkazo
Ankehitriny dia holazainay aminao ny tsiambaratelon'ny fambolena sy ny fitomboan'ny "hazo dolara". Hianaranao ny fototry ny fikarakarana sy ny fikarakarana, ary koa ny zavatra mahaliana momba ilay orinasa. Fantatrao ve? Tamin'ny 1908, ny talen'ny Orinasa Botanika Berlin, Adolph Engler, no nanome ny anarana maoderina amin'ny zavamaniry iray nahazo izany noho ny fitovian'ny ravina misy ravina mangatsiaka.
Ny fomba famolavolana sy fitomboan'ny ixora ao an-tranonao
Ixora dia zavamaniry tropikaly, izay antsoina amin'ny andriamanitra Hindoa. Noho ny fisehoany, ity voninkazo ity dia heverina ho toeram-pambolena tsara tarehy indrindra. Ixora dia akorandriaka avo, izay misy karazana volom-borona miavaka sy manopy maingoka.
Boky efitrano: fikarakarana sy fambolena
Ny tsirairay amintsika dia mahazatra ny zavamaniry ampiasaina amin'ny famoronana fefy iray, antsoina hoe hazo baolina lavalava. Vao haingana, ny hazo boaty dia nanomboka nitombo toy ny trano trano tao anaty vilany iray. Ny ravina kely, ny fitomboana miadana ary ny fahafahana mandefitra tanteraka dia mamela anao hitombo ny hazo diky avy aminy.
Ny fomba hampitomboana ny anthurium, ny fitsipiky ny fambolena sy ny fikarakarana voninkazo iray
Ny trano trano misy fasika maotina amin'ny endrika tsy mahazatra, izay toa plastika avy lavitra, dia antsoina hoe anthurium. Blaogiko mateza, noho ny fombany, antsoina hoe "flame flamingo." Zava-dehibe ny fitomboan'ny toe-karena Mba hahatonga ilay zavamaniry hampifaly anao amin'ny ravinala mamiratra, fa koa amin'ny voninkazo tsara tarehy, dia ilaina ny manatanteraka ny fepetra rehetra hampandrosoana azy.
Ny aretina lehibe sy ny bibikely anthurium
Anthurium dia voninkazo malaza be izay tonga avy any amin'ny faritra lavitra any amin'ireo tany tropikin'i Amerika Atsimo sy Afovoany. Noho ny loko mamirapiratra dia mitombo ao an-trano ny anthurium, saingy noho ny toetra isan-karazany, ity zavamaniry ity dia tena mora voan'ny aretina isan-karazany. Mba hahafantarana ny fomba hamonjena anthurium raha misy aretina, dia mila mahafantatra azy ireo ianao.
Ny fomba hambolena sy fitomboan'ny Caladium ao an-trano, toro-hevitra amin'ny fikarakarana ny zavamaniry tropikaly
Ny toerana hitadiavana ny kaladia, ny safidin'ny toerana ho an'ny orinasa Caladium thermophilique (Caladium) dia solontenan'ny fianakaviana Aroid (Araceae). Ny tanindrazan'io zavamaniry io dia i Brezila, izay itomboany manerana ny morontsirak'i Amazona. Ity dia famokarana hafanana be fitiavana, izay mety hahatratra hatramin'ny 5 metatra ny haavony. Ao an-trano, i Caladium dia ampiasaina amin'ny fitrandrahana an-dranomasina, ary ao amin'ny faritra misy anay dia malaza io zavamaniry io noho ny bika aman'endrina.
Ny antony mahatonga ny fiterahana sy ny fanadiovana ny ravina fitrandrahana
Hortensia - voninkazo mahagaga, izay misy karazany 90. Na dia izany aza, mba hahafahan'ilay zavamaniry hampifaly ny masonao, mila miasa mafy ianao, raha tsy izany, ny ravina fitrandrahana dia hanomboka hanodina mavo sy maina, ary ny zavamaniry dia ho faty tanteraka. Nahoana no maina ny hydrangea? Mety ho betsaka ny antony, anisan'izany: Ny rano mangotraka; Ny rivotra madio ao amin'ny efitrano izay hitomboan'ny hydrangea; Famaritana tsy fetezana; Famaizana tsy mety; Tsy ampy ny fanafarana ny tany (fampihenana ny asany); Tsy fahampian'ny famafazana ravina; Safidy tsy azo antoka ny tany mba hambolena.
Ireo toetra mahasoa ao Kalanchoe
Vitsy no mahalala fa ny zavamaniry Kalanchoe dia tsy hoe fitaovana fotsiny amin'ny trano fandroana, fa afaka manampy amin'ny fanasitranana aretina samihafa. Ny ravin-kiran'ny Kalanchoe dia manana tombontsoa manokana. Ny siran'izy ireo dia fitaovana manan-danja ho an'ny fanafody izay aseho ho an'ny olon-dehibe sy ny ankizy. Afaka miomana ao an-trano na mividy ao amin'ny pharmacy.
Kalanchoe dia zavamaniry isan-taona ao amin'ny fianakaviana colossae, izay tonga tany Eoropa avy amin'ireo ala orana tany Azia, Amerika ary Aostralia. Vao haingana, nanomboka nipoitra toy ny trano famolavolana, izay manintona ny fahasamihafany. Ny karazan'i Kalanchoe dia aseho amin'ny anarana mihoatra ny 200, tsy manisa karazana sy hybrids.
Ny fampiasana aloe amin'ny fitsaboana nentim-paharazana
Aloe dia toeram-ponenana malaza iray izay malaza amin'ny fampiasana azy any aoriana. Misy karazany maherin'ny 350 ao amin'io zavamaniry io, ao an-trano, ny sasany amin'izy ireo dia efa lehibe - alika mivelike, variegated, foza. Ny fanasitranana dia manana ny aloe vera sy ny alao. Ny aloe vera mampiely indrindra, fantatra ihany koa amin'ny Barbados na ny aloka ankehitriny.
Ireo karazana begonias ao an-trano
Begonia dia iray amin'ireo zavamaniry malaza indrindra sy tsara tarehy eo an-tokotanin'ny varavarankely, ao an-jaridaina sy ny valan-tseranana ao an-tanàna. Ity zavamaniry ity dia manana karazana hybrida maherin'ny 900 feno sy 2000. Ny loharano dia nofaritan'i Michel Begon voalohany, izay nahita voninkazo mahafinaritra sy mahafinaritra ao Antilles.
Fitondran-tena tsara sy fikarakarana ny Coleus
Coleus dia zavamaniry iray mibontsina, saingy sarobidy tokoa ny voninkazo, toy ny fôsily sy ny ravina mamirapiratra. Na izany aza, ny hatsaran'ny Coleus dia tombontsoa maro hafa koa. Mety any anaty trano sy zaridaina izy io, ary amin'ny roa tonta dia tsy manana fahasarotana amin'ny fikarakarana ianao, ary na dia ny mpandinika aza dia afaka miatrika (mazava ho azy, raha mahatakatra ny fambolena coleus).
Ahoana no hitomboan'ny weigela ao amin'ny efitranonao, ny fambolena ary ny fikarakarana ny orinasa
Weigel dia zavamaniry avy amin'ny karazan-kazo madinika, fianakaviana honeysuckle. Misy karazana weigela 15, izay ahazoana karazany 7, ary toy ny zavamaniry ho an'ny trano, weigela ihany no mety amin'ny hybrid. Amin'ny zavaboary misokatra, dia mitombo any atsinanana sy atsimo atsinanan'i Azia ny zavamaniry. Fantatrao ve? Weigela dia nomena anarana avy amin'ny profesora botany, simia ary ny fananganana an'i Alemaina, K
Copyright 2019 \_ Tantsaha anaty aterneto \_ Indostrian'ny indostria